China Welding tafura inoyerera zvishongedzo vagadziri uye vanotengesa | Bocheng Co-chisikwa
yakanakira nzvimbo dzakapfigirwa. zvisingaperi kusiyanisa kukwirira-chinogadziriswa nzvimbo dzekutsigira.
Kuyera kuenzanisa uchishandisa iyo grid mitsara pane 3D yekutenderera tafura inogoneka. yakagadziriswa uye isinga gadzirisike kuburikidza nemakomba marefu. yakanakira nzvimbo dzakapfigirwa. mubatanidzwa Bores / Oblong gomba
Kubatanidza system bores / Oblong hole, nekudaro akawanda ekuchinjisa sarudzo
Clamping uye kutsvaga angled bores / Oblong gomba rakakura
Clamping uye kutsvaga angled bores / Bores / Oblong mugomba wepakati
Tine hukuru hwakasiyana uye mhando dzeD28 / D16 / D22 3D yekutenderera tafura
Flat angle bar
Yakazara yekuwana nzvimbo mukati nekunze. Mikana mizhinji yekutenda kumakomba akareba uye mabhureki ehurongwa. Inoenderera ichienderera ine maburi akareba.
Yenyika Yese Pivot uye Tilt Angle
Iyo yekugeji geji chishandiso chinobatsira kwazvo patafura yekutungidza kana iwe uchifanira kushanda pane angular majoini pane yako chigadzirwa kunyanya ayo akaoma kuwana angles. Inogona kugadziriswa zviri nyore kuti usvike kukona iwe yaunoshuvira nekumaka pane chinomira
shandisa sembomira kana kutsigira • Chibatanidzo nePC bolts kana yekubatanidza mabhaudhi • zvisingagadzirisike zvinogadziriswa nekutenderera (yekugadzirisa track A) • yakaderera nzvimbo chinodiwa
Unosarudza kushandiswa munzvimbo dzakapfigirwa dzebasa • Shanduro yakapusa • Simbi
isingagadzirisike nechikero • kunyatso kuyera
Iyo yekumira yepasirese yakanyatsokodzera kukochekera simbi uye zvidimbu zvakaumbwa
Kusanganiswa sisitimu yakabereka / yakaoreba gomba kune akawanda ekuchinjisa mikana. • Yakareba uye yakasimba vhezheni ine hombe nzvimbo dzekutakura dzezvinhu zvikuru kana marefu marefu. • Kuenderera mberi nekugadzirisa kuburikidza ne oblong hole.
urefu hwekugadzirisa mudziyo
Tsigiro inoramba ichichinjika kubva pa75 kusvika 100 mm. • Inonyanya kukodzera zvakakwana kune V-block nzvimbo ine arbor. • Yekuisa yakananga mune inogadziriswa spacer. • Anomira nezvimwewo nePC-bhaudhi inogonawo kusungwa muhurongwa hwekubereka.
Iyo "V-yakaumbwa" yekumisikidza socket chishandiso chinofanirwa-kuve nacho kana uchishanda nezvinhu zvepombi. Iyo yakanyatsogadzirirwa kutsvaga pombi yakakodzera. V-zvakaumbwa kutsvaga zvidimbu zvinosiyana mukuvhura kona nekuda kwepombi fittings ane akasiyana madimeter
Spacer Set ine sikuruu tambo uye inogona kukamurwa kugadzirira kukwana kushomeka. • yekugadzirisa 5-100 (28) kukwirira musiyano pamusoro pechiso chepamusoro • chidiki chekuwedzera 1mm • ane saizi yakamiswa pamusoro pechimwe nechimwe spacer • inokwana mabhureki ese esisitimu • kuzvikiya neO-zvindori • zvine: (28) tsigiro mandrel munhu + mutakuri maoko
Pashure: Welding tafura Zvinosunga
Zvadaro: Welding tafura yekukiya mapini
3d Zvichienderana Welding Table
3d Welding Tafura Uye Zvimiro
D28 3d Welding Tafura
Modular 3d Welding Matafura
Modular Welding Tafura
Modular Welding Matafura
Nitrided 3d Welding Tafura
Simbi Welding Tafura